February 2014 | Tomorrow News
Submitted by Zay Thu on Wed, 02/26/2014 - 19:40
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သုခ၀တီ ကျောင်းတိုက်မှ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်ရှိ သီလရှင် တစ်ပါးမှာ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၂)ရက်နေ့၊ နံနက်တွင် အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခြင်းခံ ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
Read more about မြောက်ဥက္ကလာမှသီလရှင်တစ်ပါး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
အဆိုတော်ကော်ပရာ နှင့် ခင်မဥူခိုင်တို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေး ကျန်းမာစွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့
Submitted by Zay Thu on Wed, 02/26/2014 - 19:29
အဆိုတော်ကော်ပရာ နှင့် ခင်မဥူခိုင်တို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေး၊ သမီးလေးကို ယခုလ(၂၁)ရက် နံနက်(၀၀း၂၆)မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၀ိတိုရီယဆေးရုံတွင် အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့သည်။
ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၆ ပေါင် ၁၅ အောင်စရှိကြောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မွေးဖို့ ပြင်ထားသော်လည်း ကြာသပတေးနေ့မှ ကလေးကို မွေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Read more about အဆိုတော်ကော်ပရာ နှင့် ခင်မဥူခိုင်တို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေး ကျန်းမာစွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့
အဆိုနဲ့သရုပ်ဆောင်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါဆိုရင် အဆိုအလုပ်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့ သန္တာဗိုလ်
Submitted by Zay Thu on Wed, 02/26/2014 - 19:24
“အခုလတ်တလောမှာ တော့ ကြောငြာ၊မဂဇင်း ၊ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက် ဖြစ်နေတယ်၊ အဆိုနဲ့သရုပ်ဆောင် နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ် ဆိုရင် အဆိုဘက်ကိုရွှေးချယ်ဖြစ်မယ် လိုတော့ထင်တယ်၊ အခုတော့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေအမ်တီဗီကိုရိုက် နေတယ်၊ အချိန်တော့တော်တော်ပေးရမယ်ထင်တယ်၊ အခုဆိုရင်နှစ်ပုဒ်လောက်ဘဲ ပြီးသေးတယ်၊ နောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ အမ်တီဗီတွေကတော့ ကောင်းကျတယ်၊ ခေတ်ဆန်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်၊ ညီမအခွေက အချစ် သီချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ်ဆန်းတာတွေတော့ မလုပ်တော့ဘဲ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးဘဲလုပ်သွားမယ်လို့တော့ စဉ်းစားထားတယ်၊ ဒါရိုက်တာတွေကလဲ အနုပညာ ဖန်တီးမှုအား ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်၊ ထွက်လာတဲ့ အမ်တီဗီတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်အခွေမှာလဲ
Read more about အဆိုနဲ့သရုပ်ဆောင်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါဆိုရင် အဆိုအလုပ်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့ သန္တာဗိုလ်
အမှတ် (၄၀)၊ အခန်းနံပါတ် (၄-က)၊ ၃လွှာ၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် Ph/Fax : 01-8604004
Read more about ဆက်သွယ်ရန်
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 03:13
Read more about အော်ပီကျယ် ကာတွန်း-၁
လူအသေအပျောက်ရှိသော်လည်း ရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် စည်ကား
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 03:10
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော မြေ လတ်ဒေသရှိ အကြီးဆုံးဘုရား ပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ သည်။
ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပသည့် ၁၄ ရက်ကာလအတွင်း မန်းချောင်းတဲတွင် လူသုံးဦးရေ နစ်သေဆုံးခဲ့သော်လည်း ရွှေ စက်တော်ဘုရားပွဲတော်သို့ လာရောက်သည့် ဘုရားဖူးများ မျာားပြားသည့် အတွက် စည် ကားလျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။
Read more about လူအသေအပျောက်ရှိသော်လည်း ရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် စည်ကား
MSF (Holland)နှင့်ပါတ်သတ်၍ ရခိုင်လူမှု့ကွန်ယက်မှဆန္ဒထုတ်ဖော်
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 03:09
စစ်တွေမြို့ရှိ MSF (Holland)ရုံးခန်း ရှေ့တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၂) ရက်နေ့ ၌ တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထား သော လူတစ်ရာခန့်မှ ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာဆန္ဒပြခဲ့ကာ ယင်း ဆန္ဒပြမှု့နှင့်ပါတ်သတ်၍လည်း ရခိုင်လူမှု့ကွန်ယက်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ငါးရပ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
Read more about MSF (Holland)နှင့်ပါတ်သတ်၍ ရခိုင်လူမှု့ကွန်ယက်မှဆန္ဒထုတ်ဖော်
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုခံတပ် ဘယ်သူတွေ ဖြိုဖျက်ခဲ့သလဲ . . . (သို့) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် ဘယ်သူတွေဝါးမျိုသွားလဲ - ကျော်ကြီး (MDY)
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 03:05
ကျွန်တော်တို့ အညာသူအညာသား အထူးသဖြင့် မန္တလေး သူ၊သားတွေကို အခြားဒေသက လူတွေက ဒေသစွဲ၊ ဇာတိစွဲကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောလောက်စရာပါ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးသားတွေက အခြားဒေသကလူတွေ မျက်စိဆံပင်မွေးစူးလောက်အောင်ကို ဒေသအပေါ် ချစ်စိတ်၊ စွဲလန်းစိတ် ကြီးလွန်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ဒေသစွဲ၊ ဇာတိစွဲကြီးရသလဲလို့မေးလာခဲ့ရင် စွဲစရာတွေ ချစ်စရာတွေ လွမ်းစရာတွေရှိလို့ပေါ့လို့ပဲဖြေရမှာပဲ . .
Read more about မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုခံတပ် ဘယ်သူတွေ ဖြိုဖျက်ခဲ့သလဲ . . . (သို့) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် ဘယ်သူတွေဝါးမျိုသွားလဲ - ကျော်ကြီး (MDY)
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 02:56
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး က မြေသိမ်းယာသိမ်းကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူတွေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင် လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကလည်း ဒဒမိဘပြည်သူများ ခင်ဗျားဒဒ ဆိုပြီး ရိုသေကျိုးနွံစွာနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မိန့်ခွန်းပြောလေ့ရှိပါ တယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် တပ်မတော်ဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ် ရှည်သည်းခံပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ် လို့ နိုင်ငံတကာကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေထဲက ၁၆၀ ကျော်ဟာ လွှတ်တော် သက်တမ်း ၃ နှစ်အတွင်း ဘာမေးခွန်း မှ မမေးခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာ လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြောင့် အရေးယူခံရတဲ့ဝန်ကြီးမရှိပါဘူး။ လက်ရှိ အာဏာရထားတဲ့ ပါ
Read more about ပြောတာပဲ - ဇော်သက်ထွေး
မြန်မာနိုင်ငံလျှောက်လှမ်းသင့်သော အနာဂတ်လမ်းကြောင်း - ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်း
Submitted by Kyaw Zin Htike on Wed, 02/26/2014 - 02:55
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် အမျိုး သားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးသည် နိုင်ငံရေးမင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီး လတ် တလောပြသနာတိုင်းသည် အမျိုး သားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အမျိုးသားပြန် လည်သင့်မြတ်ရေးကို ခုန်ပြန်ကျော် လွှားပြီး၊ စည်းအပြင်က အစုအဖွဲ့ များနှင့် သင့်မြတ်ရေးကိုဦးစားပေး လွန်းကာ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲတတ် သည်ကို ဆင်ခြင်သင့်သည်။ ဒီချုပ်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲအလွန် တွင် ဒမိုကရက်တစ်အစုအဖွဲ့များ အကြားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အား ကောင်းမောင်းသန်လှသောနိုင်ငံရေး ရှေ့ခရီးသည် အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိထင်တိုင်းပေါက်နိုင်မည်ဖြစ် သည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံလျှောက်လှမ်းသင့်သော အနာဂတ်လမ်းကြောင်း - ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်း